कतार बाट खोजी गर्दै ७ महिनाको ग’र्भ लिएर नेपाल आएकी चेलीको पी’डा , झु’ठो बोलेर फ’सायो…. – Taja Khawar
कतार बाट खोजी गर्दै ७ महिनाको ग’र्भ लिएर नेपाल आएकी चेलीको पी’डा , झु’ठो बोलेर फ’सायो….
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०७८ समय: १५:५६:२४
वै’देशिक रोजगारीका क्रममा क’ता’र बस्दै आएकी झापा बृतामोडबाट ए’कजना चेली युवा मञ्च नेपालका सँग आएकी छिन्। उनको खास घर इलामको दा’नाबारीमा रहेको उनी बताउँछिन्। उनी विगत लामो समयदेखि कता’रमा कार्यरत थिइन् सोही क्र’ममा पश्चिम् मुगुका एकजना कपुर बाम भन्ने व्यक्तिसँग उन’को सम्बन्ध हुन गयो र उनको पे’टमा ग’र्भ र’हन गयो।
तर त्यी चे’लीको ग’र्भ रहिसकेपछी बे’खबर नेपाल आएर भएका र यहाँ आएर पनि बे’खबर बसेका त्यी युवालाई खोजी गर्न भनी त्यी चेली पनि ने’पाल आएर आ’फूलाई ग’ र्भ बनाउने कपुर बामको खोजी गरिरहेकी छिन् र सोही क्रममा उनी मिडियामा आइपुगेकी छिन्। उनले त्यी युवकसँग आजभन्दा नौ म’हिना अगाडि देखि सम्बन्ध हुँदै आएको र यस अघि पनि त्यी युवाले उनलाई औष’धि खुवाएर दुई पटक जति ग’ र्भ फा’’ल्न लगाएका रहेछन्।
उनी पहिलेओ ल’कडाउनको बेला क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी थिइन् र त्यहि’बेला त्यस केटाले उनलाई टिक’टकमा म्यासेज गरेको थियो। त्यति’बेला उनले आफूले बिहे पनि गरेको छैन र काठमाडौँबाट पढ्दापढ्दै आएको हो र आफू परीवारको एक्लो छोरो भएको अनि एउटा ब’हिनी जसको बिहे पनि एकवर्ष अगाडि भएको बताएका थिए। उनीहरू सुरुसुरुमा साथीसाथीको सम्बन्ध बना’एर बोल्दै गए।
उनले त्यी के’टाको दाइ र उ’नका साथीहरूलाई समेत सोधपुछ गर्दा सबैले उसको बिहे नभएको बताएका थिए। एकदिन उनको श्रीम’तीको फोन आयो र त्यी चेलीले फोन उठाइन् र कुराकानी गरिन्। कपुरको त पहिले नै चार वर्ष अगाडि बिहे भैसकेको रहेछ र उनको एउटा दुई वर्षको छोरी पनि रहेको थाहा पाइन्। त्यतिबेला सम्म उनको पेटमा ब’ च्चा बसिसकेको थियो र दुई महिना भैस’केको थियो।
उनीसँग त्यतिबेला पैसा पनि थिए’न र का’म नभइकन बसिरहेकी थिइन्।उनले दि’दीहरूलाई पनि सोधिन् र दिदीहरूले पनि त्यस्तो छ भने औ’ष’धि खा’नु भनेर स’ ल्लाह दिएका थिए। कपुर पनि त्योबे’ला नेपाल आइसकेको थियो र उनले फोब गर्दा उसले आफू काठमाडौँमै भएको र यतै आउन सल्लाह दियो। बच्चा ब सेपछी पहिले उसले आफ्नो साथीलाई फोन गर्न लगाएर फोन गरेको रहेछ तर उनीसँग औषधि किन्ने पैसा नभएर उनले बच्चा फा ‘ल्न स ‘किनन्। भिडियो :-
Last Updated on: August 1st, 2021 at 3:56 pm